FBC - Garee Shaampiyoonaa Atleetiksii Addunyaa 16ffaa irratti hirmaatee beekamtii fi badhaasni kenname
Garee Shaampiyoonaa Atleetiksii Addunyaa 16ffaa irratti hirmaatee beekamtii fi badhaasni kenname
Finfinnee, Fulbaana 03, 2010 (FBC) Jila Itiyoophiyaa Shaampiyoonaa Atleetiksii addunyaa 16ffaa irratti hirmaatee magaalaa hawaasaatti beekamtii fi badhaasi kenname.
Badhaasa fi beekamtii kaleessa kenname irratti shaampiyoonaa kanaarratti medaaliyaa warqee kan argataniif lafti mana jireenyaa kennameeraafi.
Sirna kenniinsa beekamtii fi badhaasaa kanaarratti kan argaman Ministirri Muummee Mootummaa FDRI Haayilamaariyaam Dassaalany atleetota kanneeniif badhaasa kennaniiru.
Ministirri Muummee Haayilamaariyaam ergaa dabarsaniinis shaampiyoonaa atleetiksii 16ffaa irratti hirmaachuun warqee kan argamsiisanis ta’e kan hin argamsiisfnee maqaan Itiyoophiyaa akka waamamu gahee olaanaa gumaachaniiru jedhaniiru.
Shaampiyoonaa Atleetiksii Addunyaa 16ffaa Landanitti geggeffame irratti qabxii galmeessisaniifis galateeffataniiru.
Ispoortiin hoggansa barbaada kan jedhan Ministirri Muummee Haayilamaariyaam , qaamoleen waldaalee ispoortii hogganan ispoorticha keessatti hirmaannaa qabaatanii kan beekanii fi beekumsa isaa kan qaban ta’uu qabu jechuun gara hoggansaatti dhufuu kan akka Atleet Haayilee Gabrasillaasee akka fakkeenyaatti kaasaniiru.
“Kanaafis fuul-duratti federeeshinoota ispoortii hogganuuf qaamoleen naannoleen bakka buufaman ogummichaa fi beekumsicha kan qaban akka ta’aniif qabsaa’uu barbaachisa jechuun” ergaa dabarsaniiru.
Ministirri Muummee Haayilamaariyaam wal-qabsiisuunis sochii ispoortii hojjachuun jireenya fayya buleessaaf barbaachisaa ta’uusaa eeranii sochiin ispoortii aadaa biyya keenyaa akka ta’u mootummaan xiyyeeffannoo kennee hojjata jedhaniiru.
Kanaaf ammoo manneen barnootaa gahee olaanaa taphachuu qabu kan jedhan Ministirri Muummee kun, manneen barnootaa bakka ispoortiin itti-hojjatamu ijaaruu, qopheessuu akka barbaachisuu fi hoggansi sadarkaa sadarkaan jiru xiyyeeffannoo kennee hojjachuu akka barbaachisu hubachiisaniiru.
Ministirri Dargaggoo fi Ispoortii Obbo Ristuu Yirdaaw gamasaaniin Itiyoophiyaan humnaa fi injifannoo qabduun wayita ilaalamu hojiin hojjatamee fi qabxiin argame gahaa miti jechuun dubbataniiru.
Fuul-duratti carraalee jiran fayyadamuun fi hojimaata wal-tumsuu cimsuun qabxii caalu argamsiisuuf carraaquu barbaachisa jedhaniiru.
Shaampiyoonaa Atleetiksii Addunyaa Landan 16ffaa irratti atleetota medaaliyaa warqee argamsiisanii lafti mana jireenyaa irratti ijaaratan Magaalaa Finfinnee keessaa kan isaanii kenname yoo ta’u, Atleet Almeaaz Ayyaanaa karee meetira 500 akkasumas Muktaar Idiriis Lafti karee meetira 400 isaanii kennameera.
Atleetota medaaliyaa Birrii argamsiisanii Birrii kuma 75, Atleet Yoomiif Qajeelchaa badhaafamaa addaa ta’uun Birrii kuma 50, dippiloomaa kan argamsiisanii tokkoon tokkoon isaaniif Birrii kuma 20, akkasumas atleetota irratti hirmaatanii badhaasi Birrii kuma 10 kennameera.
Leenjiftoonni qabxii fooyyee qabu galmeessisan Birrii kuma 60 hanga kuma 20 kan badhaafaman yoo ta’u, Leenjisaan fi Abbaan-waarraa Atleet Almaaz Ayyaanaa badhaafamaa addaa jedhamuun Birrii kuma 60 badhaafamaniiru.
Badhaasa kanaan waliigalaan Birriin miliyoona 1 ol baasii ta’uusaa odeeffannoon Ministeera Dargaggootaa fi Ispoortii irraa arganne ni-eera.
Shaampiyoonaa Atleetiksii addunyaa 16ffaa kana kan keessummeessite Landan yoo taatu, dorgommicha irratti kan hirmaatte Itiyoophiyaanis medaaliyaawwan warqee lama fi birrii sadii waliigalaan medaaliyaawwan shan argachuun dorgommicha xumuruunshee kan yaadatamudha.
Haala kanaan Itiyoophiyaan addunyaa irraa 7ffaa taatee, Afriikaa irraa ammoo sadarkaa 3 qabatteeti kan xumurte.
Oduuwwan Biroo « Taphoonni ramaddii jalqabaa Shaampiyans Liigii Yuuroop har’a galgala jalqabamu	Shaampiyoons liigichaan Cheelsii fi PSGn galchii bal’aan injifataniiru »